Sales Supervisor ( Horeca ) | Ve Ve Soft Drinks Factory ﻿
20.5.2022, Full time , FMCG
Company: Ve Ve Soft Drinks Factory
•	Sales Action Planများ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များအတွက် ချမှတ်ထားသော sales target ကို ပြည့်မီအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း
•	Sales Report များပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက် report များပြင်ဆင်ခြင်း
•	Customer demand အတက်အကျများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
•	Customer များ၏လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင် စီမံလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် customer များနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
•	တာဝန်ပေးထားသောနယ်ပယ်အတွက် ချမှတ်ထားသော sales target ကို ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
•	Customer များ၏ မေးမြန်းချက်များ၊ complain များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီး အော်ဒါဆက်လက်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း
•	Age 25 and above
•	At least2years or3years’ experience in related field.
•	ရွှေပြည်သာရုံးနှင့် တာမွေရုံးခွဲတွင် အလှည့်ကျ အလုပ်ဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။
•	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
We offer •	Attractive Salary+Commission %
Work location No. 116/A-2, Kanaung Min Thar Gyi St., Industiral Zone 1, Shwe Pyi Thar T/s, Yangon.
Company Industry: Supervisor
Chief Auditor M/F (1 Posts)
765 Days, Full time , FMCG
- ကုမ္ပဏီ၏ ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များ အား မှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း။ - စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနှင့် တာဝန်ယူစစ်ဆေးပေးခြင်း။ - ရုံးခွဲများ၏ စာရင� ...
Sales Supervisor (Modern Trade) M (2 Posts)
765 Days, Full time , 300 000 , FMCG
အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
FMCG jobs FMCG jobs Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Sales Supervisor (Modern Trade)
Yangon Region 765 Days
Yangon (Rangoon) 237 Days